မိဘကျေးဇူး ရွှေတွင်း ငွေတွင်း ပယင်းဓန ပေါကြွယ်ဝလည်း မိဘကျေးဇူး မဆပ်သေးက လူချမ်းသာဟုမဆိုသင့် ဘလော့ဂ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရူသူအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း သိန်းသန်း (theinthan255@gmail.com)ကျွန်တော်ဒီဘလော့ထဲမှာရှိသမျှ အားလုံးသည် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားခြင်မဟုက်ပါ အွန်လိုင်ထဲမှရှာဖွေတွေ့ရှိသောကျွန်တော်အတွက်အသုံးဝင်သော အရာများကိုရှာဖွေရလွယ်ရန်စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကူးယူထားသောဆိုက်များကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
Posted by theinthan at 9:18 PM
မြန်မာဖောင့်များနှင့် အသုံးဝင်သော ဝဘ်ဆိုက်မျိုးစုံပါ
Posted by theinthan at 9:17 PM
Labels: Anti Virus, Cleaner, Computer, Downloader, Driver, Fonts, Software
ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုလျှင် Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ
မင်္ဂလာပါ ဇော်ဂျီအသုံးပြုသူများသင့်အနေဖြင့် ဝင်းဒိုးတွင် ယူနီကုဒ် အသုံးပြုချင်လျှင် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ.. သင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်..Windows မှာ မြန်မာယူနီကုတ် ကို အသုံးပြုချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းများနဲ့ အမှန်မထင် ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အခက်အခဲများကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်...Windows မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် ထည့်နည်းနှင့် ထည့်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်သော အခက်အခဲများ။အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ၁။ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခုကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင့်များသည် Unicode စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အပြည့်အဝ လိုက်နာသော ဖောင့်များဖြစ်သဖြင့် မိမိစက်အတွင်း ၄င်းဖောင့်များတစ်ခုခုရှိနေရုံမျှဖြင့် မည်သည့် Unicode စာသားများကိုမဆို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်...
(က) PyidaungSu Font ဗမာ, သက္ကတ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စကောကရင်, ပိုးကရင်(အနောက်ပိုင်း), ပိုးကရင် (အရှေ့ပိုင်း), ပအိုဝ်း, ကယား, အရှိုချင်း, ပလေးပလောင်, ရူမာည်းတအောင်း,ခန္တီးရှမ်း, Aiton & Phake, တိုင်းလျမ်ခေါ်ရှမ်းနီ, ရွှေပလောင်.)
ဒေါင်းလုဒ်လင့် -- http://goo.gl/hz9MvA
( ခ) Myanmar3Font (တိုင်းရင်းသားစာများ မပါ) ၊
( ဂ) သာလွန်ဖောင့် (Burmese, Mon, Shan, Karen, Pa'o, Asho Chin, Kayah and Karenni) http://goo.gl/YszwuJ
(ဃ) အခြားယူနီကုဒ်ဖောင့်များ http://goo.gl/Ntlf72 အထူးသဖြင့် Windows 8, 8.1 တို့တွင် Myanmar text Unicode font သည် အလိုလျှောက် ထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်ပါသည်....
၂။ Unicode font ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် စာရိုက်စနစ် ကီးဘုတ် တခုခုကို ထဲ့သွင်းရပါမည်။
(က) သင်ပုန်းကြီးအတိုင်းရိုက်ချင်ရင် KeyMagic က မြန်စံ လက်ကွက် ကို သုံးပါ။
( ခ) Windows 8 , 8.1 တွင် Unicode စည်းမျဉ်းအတိုင်း ရိုင်နိုင်သည့် မြန်မာလက်ကွက် အလိုလျှောက်ထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်သည်.. ထို့ကြောင့် Control panel > Language ထဲသိုသွား၍ Add Languages ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.. ထို့နောက် ရှာဖွေသည့် Search နေရာတွင် burmese ဟု ရိုက်၍ ရှာဖွေပါ.. မြန်မာစာ / Burmese ဆိုသည်ဖိုင်လေးပေါ်လာသည်ကိုတွေ့လျှင် ၄င်းအားရွေးချယ်၍ Add ကို နှိပ်လိုက်ပါက မြန်မာစာ Unicode စာရိုက်စနစ်ထည့်သွင်းပြီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.. စာရိုက်လိုပါက Alt + Shift ဖြင့် ပြောင်းပြီးရိုက်နိုင်ပါသည်။
( ဂ) Windows XP ,7တို့တွင် Window 8 မှာပါသည့် ကီးဘုတ် လက်ကွက်အတိုင်း အသုံးပြုချင်ရင် ယူနီကုဒ် စာလုံးစီပုံအတိုင်းရိုက်နိုင်တဲ့
၃။ browser မှာ ဖောင့် ပြောင်းပေးပါ။ Chrome အသုံးပြုသူများအတွက် Menu button >> Settings >> Show Advanced Setting >> Web content ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Customize Font ကိုနှိပ်ပြီး Sans-serif Font နေရာမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခု ရွေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ Encoding ကို Unicode(UTF-8) ပြောင်းထားပါ။ Chrome မှာ Unicode ရော ဇော်ဂျီရော တစ်ပြိုင်တည်းဖတ်ချင်ရင် Chrome Extension ဖြစ်တဲ့ Parallel Universe ဆိုတာကို သုံးနိုင်ပါတယ်.. အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပါ ပြီးလျှင် Add to Chrome ကိုနှိပ်ပါ.. Add ပြီးသွားလျှင် Chrome browser ၏ ညာဘက်အပေါ် ထောင့်တွင် ကကြီးခခွေး အိုင်ကွန်လေးပေါ်နေပါလိ့မ်မယ် .. အဲဒါကိုနှိပ်ပြီး ဇော်ဂျီဖြစ်ဖြစ် unicode ဖြစ်ဖြစ် တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်လို့ရပါမယ်
http://goo.gl/UvFTwi Mozilla Firefox အသုံးပြုသူများအတွက် Menu button > Options> Content Tab> Default Font မှာ သွင်းထားတဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခုကို ရွေးပြီး OK နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ Firefox မှာ Unicode ရော ဇော်ဂျီရော တစ်ပြိုင်တည်းဖတ်ချင်ရင် Firefox Addon တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Parallel Universe ဆိုတာကို သုံးနိုင်ပါတယ်.. အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပါ ပြီးလျှင် Download Now ကိုနှိပ်ပြီး သွင်းလိုက်ပါ..
http://goo.gl/ZJidbT Maxthon အသုံးပြုသူများအတွက် Maxthon menu button (Alt +F) > Settings > Advanced ကိုသွားပြီး Webpage Display နေရာမှာ Web page font ကို Select ခလုတ်ကနေ Unicode ဖောင့်တစ်ခုခုရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
IE အသုံးပြုသူများအတွက် Control panel > Internet Options ကိုသွားပြီး Fonts ခုလုတ်ကိုနှိပ်၍ Unicode font တစ်ခုခုကို ရွေးပေးလိုက်ပြီး OK နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် Accessibility ခလုတ်ကို ထပ်နှိပ်၍ User Style sheet ဆိုတဲ့နေရာမှာ Format documents using my style sheet ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်လိုက်ပါ OK နှိပ်လိုက်ပါ .. အစကတည်းက အမှန်ခြစ်မထားရင်လည်း ဒီတိုင်းပဲ Ok နှိပ်လိုက်ပါ..
အဲဒါတွေ လုပ်ပြီးရင် ယူနီကုဒ်ကို မြင်နိုင်ပါပြီ။
( ၁) အရင် က PC Viber သုံးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် GTalk သုံးလို့ပံ ဖြစ်ဖြစ် ဇော်ဂျီစာ မြင်ရဖိုအတွက် နိုဂို စက်ထဲပါသော Arial ဖောင့်ကို Zawgyi နဲ့ အစားထိုးထားသည်များရှိပါသည်။ ထိုarial Zawgyi ဖောင့်ရှိပါက မည်သည့်နေရာတွင်မှ မြန်မာယူနီကုဒ်စာများ မမှန်ကန်ပါ။ Addon များမှာလဲ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဖြေရှင်းနည်း မူရင်း Arial ဖောင့်ကို ပြန်ထဲ့ပေးလိုက်ပါ။ http://goo.gl/edRoUH Replace လုပ်မည်ပြောလာပါမည်။ OK နှိပ်လိုက်ပါ။ ယူနီကုဒ်စာများ မမြင်ရသေးပါက Restart ချပါ။ မြင်ရလျှင် ပြီးပါပြီ။
( ၂) Arial ပြန်ထဲ့ရုံဖြင့် အဆင်မပြေသေးပါက PC Viber နောက် version အတွက် mmsd-viber.ttf ကို ထည့်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Control Panel > Fonts > ထဲမှာ KaYin2014 ဆိုတဲ့ ဖောင့်ကို ရှာပါ။ တွေ့လျှင်ဖျက်လိုက်ပါ။ အပေါ်ကအတိုင်း ယူနီကုဒ်စာများ မြင်ရလား စစ်ပါ။ မမြင်ရသေးလျှင် Restart ချကြည့်ပါ။ မြင်ရလျှင် ပြီးပါပြီ။
( ၃) အပေါ်က ၂နည်းအတိုင်းအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလျှင် Window 8 တွင် ဆိုလျှင် Registry ကိုပြင်ကြည့်ပါမည်။ https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/968916099785563/ ဒီအထဲက အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ။ restart ချကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေရပါမည်။ (မှတ်ချက် Window 8 နှင့် 8.1 အတွက်သာ)
( ၄) Chrome အတွက်ဆိုလျှင် တော့ ဒီအဆင်တွေ ပြီးရင် ရသင့်နေပါပြီ။ Mozilla Firefox မှာ ဖောင့် ပြောင်းပြီးလို့ မရသေးဘူး ဆိုလျှင်- - Firefox ကို ဖွင့်ပါ။ - address bar မှာ about:config ဟုရိုက်ထဲ့ကာ Enter ခေါက်ပါ - ပေါ်လာတဲ့အထဲမှာ address bar အောက်နားမှာ Search : ဆိုတာ ရှိပါသည်။ - အဲဒီအထဲမှာ font.name ဟု ရိုက်ထဲ့လိုက်ပါ။ စာလုံးအမဲဖြင့် Bold ဖြစ်နေသော တန်ဖိုးများက ပြင်ထားသော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီတွေအထဲမှာ Zawgyi ကို လိုက်ရှာပါ။ တွေ့လျှင် အဲဒီတန်ဖိုးအပေါ်မှာ double click ၂ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ပေါ်လာတဲ့ text box ထဲက ZawgyiOne ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးကို ဖျက်လိုက်ပါ။ တွေ့သမျှ အကုန်ဖျက်ပါ။ တန်ဖိုးတခုလုံးကို ဖျက်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထဲက တန်ဖိုးကိုပဲ ဖျက်လိုက်ပါ။ - အဓိက ကတန်ဖိုးက font.name.serif.x-unicode အဲဒီတန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါမှာ ZawgyiOne တွေ့ပါက ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။ default က Times New Roman ပါ။ ပြင်ချင်ရင် ပြင်ထားခဲ့ပါ။ တကယ်လို့ www.google.com.mm မှာ မြန်မာစာတွေ လေးထောင့်တုံးတွေပဲပေါ်ရင် အဲဒီတန်ဖိုးထဲမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်တခုခုရဲ့ နာမည်ကို ထည့်ခဲ့ပါ။ နာမည်တွေကို Fonts ထဲ့မှာ ရှာနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ Myanmar3, Pyidaungsu, Tharlon ပါ။ Firefox fonts Setting ကို Options > Content tab ထဲမှာ နောက်တခါ setting ပေးပါ။ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခုကို ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှ မရလျှင် မရတာ ထပ်တာ လာမေးတော့ ဗျာ။
Zawgyi နဲ့သာ ပေါက်တတ်ကရ လုပ်မထားခဲ့ဘူးဆိုလျှင် မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်ထည့်ထဲ့တာကော ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ပြန်ပြောင်းတာကော အဲလောက် မခက်တော့ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်တော့ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်မှတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ
Posted by theinthan at 1:39 PM
Android Phone Brand အစုံ Firmware များ
ZenFone4(A400CG) Firmware Download
ZenFone4(A450CG) Firmware Download
ZenFone4(A400CXG) Firmware Download
ZenFone5(A500CG) Firmware Download
ZenFone5(A500KL) Firmware Download
ASUS ZenFone5(A502CG) Firmware Download
ZenFone6(A600CG) Firmware Download
Asus Fonepad Firmware Download
Asus Fonepad7(FE375CG) Firmware Download
Asus Fonepad7(FE171CG) Firmware Download
Asus Fonepad7(FE170CG) Firmware Download
Asus Fonepad7(FE171MG) Firmware Download
Asus Fonepad7(ME372CG) Firmware Download
ASUS Fonepad7Dual SIM (ME175CG) Firmware Download
Asus Fonepad 8 (FE380CG) Firmware Download
ASUS Fonepad 8 (FE8030CXG) Firmware Download
ASUS Fonepad Note6(ME560CG) Firmware Download
ref Android Xda Click to More Firmware
oppo Firmwares Stock ROM Download
SAMSUNG Firmwares Stock ROM Download
iTune Jailbreak and Firmwares Download
Almost All LG Feature Phone Flash File / Firmware Download
All LG Flash files (DLL) Download
All LG Flash tools & software Download
How to Download All LG Phone Firmware?
Most LG Feature Phone Unlock tools/update software/drivers download
LG Smartphone Firmware Download
Official Stock MetroPCS LG Spirit 4G ROM / Firmware
Official Stock LG Lucid 4G Firmware / ROM Download
Official Stock LG Revolution VS910ZV9 ROM / Firmware
Official T-Mobile LG myTouch 4G E739 Firmware / Rom
Official LG Escape P870 V10I Firmware / Rom
Official LG Optimus G F180 S K L Android 4.1.2 Jelly Bean Firmware Download
Official LG Optimus Vu2F200L Firmware Download:
Official LG Motion 4G Firmware Download
Stock LG Optimus Vu Firmware Download
All LG Optimus Black Gingerbread Firmware Download
Official LG Optimus Sol E730 Firmware Download
Stock LG Optimus LTE2Firmware Download
Official LG Optimus 3D Max Firmwares Download
Official LG Prada 3.0 Firmwares Download
Official LG Optimus 4X HD Firmwares Download
Official LG Optimus L5 Firmware Download
Official LG Optimus L7 Firmware Download
Official LG Optimus L3 Firmware Download
LG Nitro HD official kdz Firmware Download
T-Mobile G2X P999 Original Firmware Download
LG Optimus 2X P990 Firmware Download
LG Marquee Firmware Download
Verizon LG Revolution Original Firmware Download
LG Optimus Pro C660 Firmware Download
LG Layla GM750 Firmware and Flash File Download
LG Optimus M Firmware .cab Download
More LG Firmware Download
ACER F900 FIRMWARE
ACER LIQUID MINI FIRMWARE DOWNLOAD
LIQUID E1 V360 FIRMWARE
ACER LIQUID E2 V370 FIRMWARES
LIQUID E700 E39 FIRMWARE
ACER LIQUID GALLANT E350 FIRMWARE DOWNLOAD
ACER LIQUID JADE S S56 FIRMWARE
ACER LIQUID S1 S510 FIRMWARE DOWNLOAD
ACER LIQUID S2 S520 DOWNLOAD FIRMWARE
ACER LIQUID Z500 FIRMWARES
ACER X960 FIRMWARE
ACER LIQUID Z110 FIRMWARE
ACER LIQUID Z200 FIRMWARE
ACER LIQUID Z130 FIRMWARE
ACER LIQUID Z150 FIRMWRE
MIUI Firmwares Stock ROM Download
Sony Xperia Firmwares Stock ROM Download
LAVA iris 700 firmware or Mirror
LAVA iris 500 firmware or Mirror
LAVA iris 456+ Firmware or Mirror
Lava Iris 405+ Firmware or Mirror
LAVA 708 Firmware Password တောင်းရင် www.minminchit.org
Lava Iris 800 Firmware Password တောင်းရင် www.minminchit.org
AIS super combo pro 5.0 lava pro 5.0 star firmware
CoolPad 5890 Stock Rom
Model: CoolPad 5890
CoolPad 7060 Stock Rom
Model: CoolPad 7060
CoolPad 7231 Stock Rom
CoolPad 7270 Stock Rom
Model: CoolPad 7270
CoolPad 7290 Stock Rom
Model: CoolPad 7290
CoolPad 7295 Stock Rom
CoolPad 7295A Stock Rom
Model: CoolPad 7295A
CoolPad 7295c Stock Rom
Model: CoolPad 7295c
CoolPad 7296 Stock Rom
Model: CoolPad 7296
Coolpad 7298A Stock Rom
Model: Coolpad 7298A
CoolPad 7320 Stock Rom
Model: CoolPad 7320
CoolPad 8076 Stock Rom
Model: CoolPad 8076 SC8810
CoolPad 8122 Stock Rom
Model: CoolPad 8122
CoolPad 8190Q Note3 Stock Rom
Model: CoolPad 8190Q Note3
CoolPad 8295M Stock Rom
Model: CoolPad 8295M
CoolPad 9080W Stock Rom
Model: CoolPad 9976A
How to Flash: Follow the instructions that comes with the firmware.
CoolPad 9976A Stock Rom
CoolPad F1 8297 Stock Rom
Model: CoolPad F1 8297
CoolPad F1 8297W Stock Rom
Model: CoolPad F1 8297W
Type - Stock Rom
Country – All
ဈေးကွက်ထဲ ကို ၀င်ရောက်လာတဲ့ Kenbo smartphone အချို့ရဲ့
Firmware ကို စုစည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
GW011 -http://yunpan.cn/cJTMyIz4cL5K9 key: 8c24
GW471 -http://yunpan.cn/cJIPdJApBCBkt key: 5021
GW500 -http://yunpan.cn/cJIuWaKyqwi4b key: 0bcc
GW532 -http://yunpan.cn/cJIuxnb8BSAqK key: 0f67
GW550 -http://yunpan.cn/cJTMQChL3xECY key: 17d8
Hero K1 -http://yunpan.cn/cJTMd4rYKaPuz key: 17ce
tablet7-http://yunpan.cn/cJTMmpWXN7BB5 key: a4f4
011 -http://yunpan.cn/cJNRTKAUiavRH key: c677
W417 -http://yunpan.cn/cJTMF7YkfV7cI key: 722d
P7002 -http://yunpan.cn/cJTMLNvFfgh4A key: fec5
P9000B – http://yunpan.cn/cJTMufA9SQDKi key: db56
Master Smart Phones Stock ROM Firmwares
Master A702 FIVE
Master A702 INSPIRE
Master A702 INSPIRE2
Master MS200 OPTIMA
Master MS300 FAMOUS
Master MS400 SHINE
Master MS500 PROUD
Master ST100 MARS
Master ST200 EARTH
Master ST400 UNIQ
Master ST410 WIZARD
Master ST500 ESTEEM
Master ST600 GREAT
More Master Firmware >>>
X5Max X5 Y27 Y28 Xshot X3S Y15 Y22 Xplay3S
&amp;lt;a href="http://www.bidvertiser.com/bdv/BidVertiser/bdv_advertiser.dbm"&amp;gt;internet marketing&amp;lt;/a&amp;
Gfive A79 (256MB model) Android 2.3 Gingerbread Download 168 MB
Gfive A79 (512MB model) Android 2.3 Gingerbread Download 120 MB
Gfive A86 Model A Android 4.0 Ice Cream Sandwich Download 294 MB
Gfive A86 Model C Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich Download 312 MB
Gfive A90 Android 2.3.6 Gingerbread Download 220 MB
Gfive A770 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 422 MB
Gfive A800 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 528 MB
Gfive Bravo A2 Android 4.0 Ice Cream Sandwich Download 144 MB
Gfive F7 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 507 MB
Gfive G7 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 476 MB
Gfive G9 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 465 MB
Gfive G9 Pro Android 4.2.1 Jelly Bean Download 331 MB
Gfive G9 4G Android 4.2.1 Jelly Bean Download 282 MB
Gfive G9T Android 4.2.1 Jelly Bean Download 467 MB
Gfive G9T 4G Android 4.2.1 Jelly Bean Download 563 MB
Gfive G95 Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich Download 312 MB
Gfive I88 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 361 MB
Telego FIRMWARE COLLECTION
Posted by theinthan at 10:02 AM
3D Text နဲ့ 3D Logo လုပ်ချင်သူများအတွက် (1)
Computer Desktop အလှဆင်ရန် (3)
E-Book စာအုပ်စင် (4)
Email နှင့် G-talk အကြောင်း (5)
Flash Song လုပ်နည်းများ (2)
Funny ဟာသ (1)
Myanmar Calendar Gadget (1)
PDF လုပ်နည်း (Adobe Acrobat 3D 8.1.7) (2)
Photoshop ဓါတ်ပုံနည်းပညာ (10)
Poem ပုံပြင်များ (1)
video converter များ (9)
WIFI Password ခိုးနည်းလေး (6)
အဘိဓာန်များ Dictionary (2)
ဒီမှာနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဆီ Email ပို့နိုင်ပါတယ်
blackjack regeln | Online Casino | CHATBOX | ONLINE CASINO | forex trading
မြန်မာ Bloger များ၏ ပိုစ်များ